काठमाडौं– कलाकार मनोज गजुरेललाई कोभिड १९ पोजेटिभ अर्थात् कोरोना संक्रमण भएको छ । कलाकार गजुरेलले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै आफूलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘भर्खरै प्राप्त रिपोर्ट अनुसार, मेरो शरीरमा कोभिड १९ ’पोजेटिभ’ देखिएको छ । गतहप्ता दाजुलाई अस्पताल लाने र ल्याउने गरेको थिएँ । गत बिहिबार सामान्य टाउको दुख्यो । शुक्रबार ९८ डिग्रीको ज्वरो देखियो । शनिबार ढाडको दुखाई महसुस गरेँ । त्यसपछि हिजो पिसिआर टेस्ट भयो । भर्खरमात्र कोभिड पोजेटिभ भनेर रिपोर्ट आएको हो ।
संक्रमणबाट बँच्न सुरक्षाका सम्पुर्ण उपायहरू अपनाउँदा अपनाउँदै पनि यो जुनसुकै बेला जसलाई पनि लाग्न सक्ने रहेछ । आफू सचेत रहन, अरुलाई सुरक्षित रहन तथा ’पोजिटिभ’ देखिई हालेमा पनि नआत्तिन, बिश्वासिलो चिकित्सकको सम्पर्कमा रहन अनुरोध छ । म पनि स्वास्थ्य अभियन्ता डा. रविन्द्र समिर को सुझाव, सल्लाह र ’कोभिड उपचार गाईडलाईन’मा छु ।
Previous Postनो टाइम टू डाईको ओटीटी मूल्य ६ सय मिलियन डलर !
Next Postखड्ग जात्रा सम्पन्न, कुमारी यात्रा रोकियो
युट्युबमा ज्योतिष हरिहरको शुभ लभ
काठमाडौ – २०७५ चैत १५ गते रिलिज फिल्म ‘शुभ लभ’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । ज्योतिषका रुपमा परिचित हरिहर अधिकारीको डेब्यू रहेको फिल्म…
किरण पौड्याल(रासस) इलाम–फिल्मको खास काम के हो ? मनोरञ्जन दिने र सन्देश प्रदान गर्ने, तर पछिल्लो समय भने फिल्मबाटै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न थालिएको…